Mvere → Mbatya dzekusimudzira • nyanzvi P & M yekushongedza kwemakomputa
Nyama chipfeko chakakurumbira kwazvo, chinowanzo kubatwa sechinhu chisingagumi basa kana mbatya dzekushambadzira, iyo inobvumira yakawanda rusununguko rwekufamba kupfuura iyo jekete, apo ichichengetedza zvakavanzika zvevashandi.
Mvere chigadzirwa chakakura chekushongedza kwemakomputa
Aya ndiwo mabhenefiti anoita kuti ganda rive rakakurumbira kwazvo mumaindasitiri mazhinji. Idzo dzisarudzo dzinoitika kazhinji kwevashandi, pakati pevamwe, mukugadzira, zvigadzirwa nemidziyo yekuvaka, asiwo nezvinangwa zvepachivande kunge zvipfeko zvinoshanda uye zvinodziya zvemabasa akasiyana siyana.
Adler 506 makushe evarume pamwe nekugona chero kwekushongedza
Kusarudzwa kwakakura kweshangu kunowanikwa matiri shopu inouya akapfuma ruvara pendi.
Nekuda kweizvi, iwe unokwanisa kugadzirisa yako sarudzo yekuzvizivisa nemakambani emakambani.
Pamusoro pezvo, kune yakasimba uye yakanakisa munhu, unogona kuraira kuurayiwa pamvere kombasi yemakomputa. Isu tinotengesa vakadzi, evarume, vana uye unisex modhi dzakasiyana siyana.
Yakafanana nesarudzo inowanzoitwa yezvipfeko zvebasa
Jekete jaketi anowanikwa muzvitoro zvedu anogadzirwa nemakambani akadaro Reis uye Leber & Hollman.
Isu tinopa yakasarudzika mamodheru zvichienderana nemadiro emunhu - akazara zvakakwana kana akashongedzerwa chete nezipfupi zipi pamutsipa, iine kana isina hood.
Mhando zhinji dzakagadzirirwa ane anoshanda anomira-up collar, inodzivirira kubva kunotonhora, semuenzaniso kana uchishanda kunze kana mufriji mamiriro (kwenguva pfupi, mune basa rekugara mune yakaderera tembiricha mamiriro, tinokurudzira zvipfeko zvezvitoro zvinotonhora uye freezers).
Mazhinji sweatshirts kubva kune yedu assortment ane mapeniki anoshanda ane zippers, inonyanya kufarirwa mumamiriro ekuwedzera kwebasa.
Isu tinopawo Bhutsu mumavara ekunyevera uye nezvinhu zvinoratidzira, iyo inonyanya kufarirwa pakati pevashandi vemumigwagwa, vashandi vekuvaka, marudzi ese epuratifomu uye ngarava dzechikepe. Mamwe emas sweatshi ane dhiri pachiuno, achibvumira kwete kungogadzirisa iyo sweatshirt kune dzakasiyana mhando dzehuwandu, asiwo nemamiriro ekunze.
Makambani mazhinji anoikoshesa kuva wega uye kusarudzika, kunyanya kana vashandi vakaita nzvimbo yekumiririra mukudyidzana nevanogona kuita makondirakiti uye vatengi.
Iyo nzira yekumaka nekomboni yakashongedzwa pazvipfeko
Imari nekuda kweichi chikonzero iyo yakadhindwa shangu chinhu chakakurumbira chekupfeka mhando dzakasiyana dzezviitiko zvekunze, mumiriri anomiririra, makonferensi nekudzidziswa.
Ndichiri kuvaka chinopihwa, hatina kukanganwa nezvacho mudiki. Muchitoro chedu muchawana dehwe revana muvara dzakasiyana uye saizi. Isu tinoitawo zvekushongedza pazvipfeko nemalogo ezvikoro nemakirabhu avo.
Nyama pamwe chete na T-shitsi ndidzo dzakanyanya kusarudzwa zvigadzirwa zvekushambadzira zvese zvebasa uye zvipfeko zvekushambadzira.
Tinokukoka kune zvedu shopu, kwa iwe iwe kwaizowana huwandu hwakazara hwebasa uye hweshambadziro.
4f bvudziadler nemveremhirizhonga yevakadzidehwe rakanakisanguo dzebasagandadehwe revakadziplus size yevakadzi dehweVanhukadzi 'vemakambani bvudziMvere dzemadzimai dzine hooddehwe revanamabhachi emvere evasikanadehwe revashandikambani yebvudzimhoro tecmvere dzemurumemvere dzemurume allegrovarume vanoshanda bvudzidehwe pakukumbirabvudzi rinoratidzamugadziri wemverekushambadzira nedehwekushanda nedehweshanda yebasa Allegroinoratidza basa rebvudzibvudzi rinodzima motodehwe remautonemvere dzakarukwanemvere nemuchekanemvere nekambani logonemvere pamwe anodhindanemvere nekambani anodhindahusina kudhura